Kandidà Beriziky Jean-Omer: “Tokony hifanaja amin’izao fifidianana izao” | NewsMada
Kandidà Beriziky Jean-Omer: “Tokony hifanaja amin’izao fifidianana izao”
“Vanim-potoana lehibe eto amin’ny tantaran’ny firenena izao, satria miatrika fifidianana isika. Amin’izany, manatanteraka adidy masina. Mila fifanajana izany amin’ny tomponandraikitra, satria zava-dehibe loatra ny ataontsika.“
Izay ny nambaran’ny kandidà Beriziky Jean-Omer, omaly, ny amin’ny fanalan’ny eo anivon’ny kaominina Antananarivo Renivohitra ireo takelaby misy ny peta-drindriny amin’izao fifidianana filohan’ny Repoblika izao.
Toa misy fanavakahana sy tsy fijerena araka ny tokony ho izy ny fampitovian-jo eo anatrehan’ny lalàna ny kandidà rehetra, raha ny fijeriny ny zava-misy.
Efa nahazoana fahazoan-dalana ny takelaby
“Tany amin’ny kaominina izahay: aiza ary amin’ny fomba ahoana no nanendahanareo an’io zavatra io? Lazaina fa misy fanapahan’ny monisipaly. Nanontaniana izany: tsy misy na iray aza. Inona izany?”, hoy kosa ny mpanolotsaina momba ny lalàna io kandidà io, ny Me Razafinjatovo Willy na i Olala.
Nahazo fahazoan-dalana ny olona nametraka ny takelaby, ary efa nahazoan’ny kaominina vola. Fifanarahana amin’ny orinasa tsy miankina izany, ary efa fananana nanokanan’izay orinasa nahazo izany ny takelaby amin’ny toerana iray. Azy izany io, fa tsy misy idiran’ny kaominina. “Izahay no nanao fifanarahana amin’io olona io”, hoy izy. Hatramin’ny volana novambra, efa naloa ny volan’ilay olona.
“Tokony hampitoviana ny kandidà rehetra. Tokony hotenenin’ny Ceni ny kaominina amin’ny famelana ny sarin’ireo olona ireo”, hoy ihany izy. Hafahafa, ny Ceni indray no manontany izay tian’ny kandidà hatao ny amin’izany(?).
Hatraiza marina ny fanajan-dalàna amin’izao fifidianana izao? Mila tsy ho fantatra intsony hoe iza no manao inona; eny, na ny lalàna aza.